Dhinda rekubudisa- Apicmo cdmo Manufacturers
Monosialotetrahexosylganglioside sodium inonzi neurotrophic nutrient inoshandiswa GM1. Ramba Reading
08 / 30 / 2018Posted by: APICMOCategory: Chirapa0 zvaanofarira
Pyridine ndiyo inonzi heterocyclic compound yeAineine kind. Pyridine inotorwa kubva kuBenene kuburikidza nekudzorerwa kweboka CH neN-atomu. Iyo shanduro yePyridine inofananidzwa nehutano hweBenene, nokuti inofananidzwa nekudzorerwa kweboka CH neN. Kusiyana kukuru kunosanganisira:
08 / 28 / 2018Posted by: APICMOCategory: Chirapa0 zvaanofarira
A heterocyclic compound, iyo inozivikanwawo sechindori chine musimboti inowanzo inamo maatomu ezvikamu zviviri zvakasiyana sezvikamu zvechindori chayo / zvindori. Heterocyclic compounds zvingangodaro inoumba zvakasiyana-siyana uye inonyanya kuwanda yemhuri yezvinhu zvakasikwa.
Zvose zvaunoda kuziva pamusoro pe spiro mazana
A spiro makemikari inowanikwa muhupenyu umo mabhini maviri ebicyclic akabatanidzwa neatomu imwechete. Muzvisikwa, zvivako zvezvindori zvingangove zvakafanana kana zvakasiyana, uye atomu inosungirira zvindori zviviri inonzi spiroatom (inopisa atomu), kazhinji Icho chikamu che 4 carbon (inozivikanwawo semhepo inopisa), uye inogona uyewo uve silicon, phosphorus, kana arsenic
2- Chloro-5 methylpyrimidine ine chiedza chakachena chekrisstalline pfumbu inoratidzika pane firiji. Vamwe vanogona kutsanangura mumvuri wemavara se-off-white. Haina kunhuhwirira uye inorema masendimita 128.56 per mole. Kira chemakemikari yaro inozivikanwa seC5H5CIN2 uye Yakasimbiswa Molecular - Input line In Entry System (SMILES) seCC1 = CN = C (CL) N = C1. Iyo kemikari ine nheyo inoputika iyo inowanikwa pakati pe89-92 madigiri centigrade, uye imwe yamuti ye 239
07 / 19 / 2018Posted by: APICMOCategory: CMO zviripo1 Comment0 zvaanofarira
Kuroora Copper Marketing & Advertising
07 / 18 / 2018Posted by: APICMOCategory: CMO zviripo1 Comment0 zvaanofarira
Vakapedza kudzidza kubva kuDhipatimendi rezvemakemikari, Stanford University, Stanford University
Inyanzvi dzakanaka muhutano hwehutano hwehutano hwehutano hwehutano hwakakosha. Simba mukushandiswa kwesanganiswa reagents uye unyanzvi huri muruoko rwekushandiswa kwebenonitrile, phenol, naphthol, coumarin, thiocoumarin, quinoline, quinozoline, pyrimidine, pyridine, indole, indazole, Imidazole uye benzimidazole annulated heterocycles.